Fahafahana Accrisoft: karazana CMS hafa | Martech Zone
Fahafahana Accrisoft: karazana CMS hafa
Alatsinainy 22 Febroary 2010 Alahady, Jona 28, 2015 Michael Reynolds
Ny ankamaroan'ny tranonkala maoderina dia mampiasa CMS (Content Management System) ahafahan'ny mpitantana ny tranonkala manova, mandefa atiny ary mitantana ny tranokala. Mifanohitra amin'ny andro taloha niantsoana ny masoivohonao hamolavola izany fanovana izany, izay mety ho lafo be ary mitarika fahatarana amin'ny fanavaozana. raha fitantanana tranokala teo aloha dia tsy iza fa ny olona manam-pahaizana be (indraindray antsoina hoe "webmaster"), CMS manokatra fifehezana ireo mpikambana tsy teknikan'ny fikambanana, toa ny talen'ny marketing, mpanampy amin'ny fitantanana, na koa ny CEO.
At SpinWeb, mamorona tranokala amin'ny Fahalalahana Accrisoft sehatra. Freedom dia CMS izay somary miavaka ary manana tombony tena tsara mihoatra ny mpilalao sasany. Indianapolis dia toa tanàna WordPress ary hitako ireo orinasa maro mampiasa azy io ho toy ny sehatra tranokala. Tsy misy maharatsy ny WordPress ary raha ny marina ny ahy bilaogy manokana sy tranokala miteny dia miorina amin'ny WordPress. Na izany aza, ny Freedom dia manana tombony miavaka rehefa miresaka momba ny fampiasa, ny halalin'ny endri-javatra ary ny fanohanana. Faly aho fa tsy manam-paharoa izahay ary mampiasa ny Fahafahana ho toy ny lohan'ny safidintsika, indrindra ho an'ireo fikambanana lehibe kokoa izay mitaky mihoatra noho izay omen'ny sehatra loharano misokatra.
Rafitra fitantanana atiny miaraka amin'ny fanohanana
Ny zavatra tsara iray momba ny Freedom dia io tohanana tanteraka ary notanan'i Accrisoft. Misy ekipa fampandrosoana mivoatra izay mahazo karama hamoronana endrika vaovao, hanitatra ireo modely efa misy ary hamadika ny valin'ny mpanjifa ho sehatra manome hery ireo fikambanana hifampiresaka amin'ny Internet. Accrisoft dia orinasa lehibe ary nanana resaka mahafinaritra be tamin'ny CEO aho Jeff Kline momba ny hoavin'ny sehatra sy momba ny orinasa an-tserasera amin'ny ankapobeny.
Ny codebase an'ny Freedom dia voaroaka avy amin'ny mpizara afovoany izay miantoka fa tsy miova ny fametrahana rehetra. Miaraka amin'ny sehatra loharano misokatra marobe, ny maodely mahazatra dia ny manangana tranokala 50+ samihafa izay mampiasa plug-in, kinova ary hacks samihafa izay lasa nofy ratsy hitazomana ho maso ivoho. Ny fahalalahana dia mamela ny SpinWeb hanohana sy hitazona tranokala maromaro tsy voafetra nefa tsy miahiahy momba ny tsy fitoviana eo amin'izy ireo. Satria ny rindrambaiko rehetra dia alefa ao anaty rahona, dia tsy mila miahiahy momba ny fametrahana rindrambaiko amin'ny solosain'izy ireo ny mpanjifanay. Afaka miditra fotsiny izy ireo ary mandeha miasa. Ho fanampin'izay, afaka manavao ny tranonkalan'ny mpanjifanay izahay ao anatin'ny minitra vitsy aorian'ny famoahana kinova vaovao an'ny Freedom.
Interface an'ny mpampiasa miavaka
Freedom koa dia manana interface tsara an'ny mpampiasa. Na dia mety hampisavoritaka amin'ny mpampiasa farany aza ny sasany amin'ireo sehatra misokatra, ny Freedom dia manolotra interface madio sy tsotra izay manamora ny fitantanana ny tranonkalany ny olona tsy ara-teknika.
Module azo zahana amin'ny mailaka, endrika, e-varotra ary maro hafa
Ny fahalalahana dia manome maodely matanjaka maromaro izay mitambatra amin'ny faritra hafa amin'ny tranokala. Ohatra, Freedom dia misy built-in Modely Marketing amin'ny mailaka, izay manome ny tompona tranokala vahaolana manokana momba ny Marketing amin'ny mailaka napetraka ao anaty tranokala. Tafiditra ao anatin'izany ny modely, ny fandaharam-potoana, ny fitantanana ny mpanjifa ary ny antontan'isa momba ny fandefasana namboarina tao anatiny. Izy io koa dia misintona data avy amin'ireo modely hafa mba hahafahan'ireo mpivarotra mandefa fampielezan-kevitra amin'ireo lisitra namboarina avy amin'ny faritra hafa amin'ilay tranokala, toy ny fisoratana anarana amin'ny hetsika.
The Module endrika ao amin'ny Freedom dia mahery vaika ary mifaninana amin'ny maro amin'ireo mpanao endrika tsy miankina misy ankehitriny. Miaraka amin'ny Freedom, ny mpandrindra tranonkala tsy teknika dia afaka manangana endrika sarotra (na tsotra) ho an'ny rindranasa, ny fisoratana anarana amin'ny hetsika, ny fanomezana ary ny hitarika ny fisamborana azy rehetra amin'ny tsindry vitsivitsy. Izany data tahiry izany dia azo zahana sy aondrana amin'ny fomba isan-karazany na koa ampidirina ao anaty harona fiantsenana ho an'ny fampiharana e-varotra mandroso.
Ny tranobe harona fiantsenana in Freedom dia mamela ny orinasa hametraka vahaolana e-varotra mifangaro ao amin'ny tranonkalany ihany koa ary hivarotra vokatra amin'ny ezaka kely indrindra. Izy io koa dia mety hitatra amin'ny fisoratana anarana amin'ny hetsika, ahafahan'ny fikambanana mivarotra fisoratana anarana amin'ny hetsika ary hanaiky ny carte de crédit na e-check amin'ny Internet.
Freedom dia manana modely namboarina ho an'ny Blogs, Alimanaka amin'ny hetsika, fampahalalana an-gazety, Podcast, forum, lahatahiry, RSS, programa afiliana, faktiora ary fandatsaham-bato, raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy amin'ireo safidy hafa ao amin'ilay rafitra. Ho fanampin'izany, ny ankamaroan'ny modules dia afaka mifangaro amin'ireo tambajotra sosialy mitarika, izay midika fa ny fanavaozana ny tranokala dia azo atosika mivantana any amin'ny Twitter, Facebook ary LinkedIn.
Ny Freedom dia rafitra azo antoka. Tsy rindranasa voasedra tsara sy mafy fo fotsiny izy io, fa manana endri-pitantanana mpampiasa marobe marobe, izay ahafahan'ny mpitantana tranokala maro manana andraikitra sy haavon'ny fidirana samy hafa. Izy io koa dia manana maodelin'ny Workflow, izay mamela ny mpanitsy hanaiky na handà ny fanovana alohan'ny hiainany mivantana.
Toerana fandaminana mpikambana
Ho kivy aho raha tsy nanasongadina ny vahaolana tena tsara an'ny Freedom ho an'ireo fikambanana miorina amin'ny mpikambana, toy ny fikambanana. Ny maodelin'ny Freedom's Membership dia mamela ny vondrona miorina amin'ny mpikambana hitantana angon-drakitra feno momba ny mpikambana ary hamela ireo mpikambana ireo hitazona ny kaontiny sy hanao fanavaozana amin'ny alàlan'ny tranonkala. Ny maody dia mamela ny faktioran'ny mpikambana, CRM, marketing, ary ny fifandraisana. Azon'ny orinasa atao koa ny mampiasa azy io ho toy ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa ary raha ny marina dia ny data sy ny rafitra faktioran'ny mpanjifa iray manontolo ao amin'ny SpinWeb dia tanterahina amin'ny alàlan'ny Freedom, miaraka amin'ny faktiora amin'ny mailaka, ny faktiora miverimberina ary ny fandoavam-bola amin'ny Internet.
Araka ny hitanao, ny tombony lehibe amin'ny fampiasana Freedom dia ny hoe eo amin'ny toerana iray ny zava-drehetra. Talohan'ny niasa taminay, maro tamin'ireo mpanjifanay no nampiasa fitaovana isan-karazany amin'ny marketing amin'ny mailaka, e-varotra, bilaogy, fisoratana anarana amin'ny hetsika, atiny web, ary fitantanana mpikambana. Aorian'ny fifindrana mankany amin'ny Freedom, dia tian'izy ireo ny fanamorana ny fampiasana sy ny fahombiazany (tsy lazaina intsony ny fitehirizana vola) amin'ny fananana ny zavatra rehetra amin'ny toerana iray.
Rafitra fitantanana votoatin'ny motera fikarohana
Freedom dia milina fikarohana ihany koa. Ireo tranonkala mifototra amin'ny fahalalahana dia mampiasa "HURLs" (URL azo vakina amin'ny olombelona) izay midika fa azo zahana amin'ny alàlan'ny motera fikarohana mora kokoa ny atiny. Ny HURL dia manampy amin'ny fanamafisana ny laharan'ny tranokala amin'ny motera fikarohana ary toa tsara kokoa amin'ny olombelona ihany koa noho ny URL mahazatra natokana ho an'ny database amin'ny rafitra maro hafa. Ny HURLs ao amin'ny Freedom dia azo namboarina tanteraka.
Amin'ny maha Provider Accrisoft Solution Provider anao, SpinWeb dia afaka manaparitaka tranonkala haingana dia haingana sy manana kalitao tsy tapaka isaky ny mandeha noho ny fanarahan-dalàna momba ny Freedom. Tian'ireo mpanjifanay ny fahamoran'ny fampiasana, ny fampidirana mahery ary ny haavon'ny fifehezana ananany ankehitriny rehefa mitantana ny tranonkalany.
Tags: accrisoftfahalalahana accrisoftCMSrafitra fitantanana atinyspinweb
Fampidirana trano sy media sosialy
Jun 20, 2011 ao amin'ny 2: 52 PM
Tiako ny Freedom CMS! Lahatsoratra tsara.